Flat NFT Hydroponic System
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Hydroponics > NFT Hydroponic စနစ် > Flat NFT Hydroponic System
ပြည်တွင်းစျေးကွက်နှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်သို့အရွက်စိမ်းလန်းသောဆလတ်ရွက်များစိုက်ပျိုးရန်အတွက် Flat NFT Hydroponic system ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့၊ ဥရောပ၊ အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှရှိနိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်သို့တင်ပို့ပြီးဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် 100% အပျိုစင်ကုန်ကြမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းများ၊ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုသင့်အားပေးမည် â€ ‹
Flat NFT hydroponic စနစ်
Flat NFT hydroponic စနစ် isakind of cultivation method of which the root system of the plants is connected with the nutrient solution, This method makes the nutrient solution flow circularly, ensuring that the plants can be supplied with water and nutrients continuously and that the root system of plants can get the oxygen constantly.
2.Product Parameter (Specification) of Flat NFT hydroponic စနစ်
8.5 * 5cm
PVC လိပ်ခေါင်း။ ပတ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်ပြားချပ်ချပ်ပြွန်
Flat NFT hydroponic စနစ် for planting leafy greens lettuce main Feature including:
(၁) ရေကိုချွေတာခြင်း - သိသာထင်ရှားတဲ့ရေချွေတာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးရေသက်သာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်။
(၂) ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ခြင်း - ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိသောအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာကိုအသုံးပြုသည်။
(၃) လုပ်အားကိုချွေတာခြင်းနှင့်အလွယ်တကူစီမံခြင်း - ရေနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်နှင့်ပမာဏဖြင့်အတူတကွထောက်ပံ့။ စီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူသည်။
Flat NFT hydroponic စနစ် for planting leafy greens lettuce consists of plant-fastening cup, cultivation PVC pipe, supporting materials and nutrient-solution recycling system and control system, featured by easy installation, handy management, protecting environment, prohibiting diseases, etc., used for small leaf vegetables. It is suitable for the production of the vegetables in agricultural park or plantation, ecological restaurant,etc.
Flat NFT hydroponic စနစ် for planting leafy greens lettuce with good quality with SGS certificate.
Flat NFT hydroponic စနစ် for planting leafy greens lettuce delivery by container in bulk, we always delivery on time to meet our client requirements. All the material is put in containers.
Flat NFT hydroponic စနစ် for planting leafy greens lettuce from Jianda Greenhouse Company Welcome to our factory to haveavisit and any inquiry.
Ebb ပြီးတော့ Flow NFT Hydroponic စနစ်
floating NFT Hydroponic စနစ်
Leafy Greens ဆလတ်စိုက်ပျိုးခြင်းအတွက် Flat Tube Nft Hydroponic System